राजनीति आफैँमा फोहोरी खेल होइन, राजनीति गर्नेहरूले फोहोरी बनाए– प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा देशभक्ति हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा शुक्रबार नेपाल स्काउटले आयोजना गरेको ‘बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा राजनीतिबारे बालबालिकाहरुलाई बताउँदै उहाँले राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाइएको बताउनुभयो
दिपेन्द्र अधिकारीकाठमाडौं । कोरोना भाइरस लिएर प्रवेश गरेको सन् २०२० हामीबाट विदा भएको छ । मानव जातिको गति नै रोकिदिएको २०२० ले विश्व जगतलाई कहाली लाग्दो छाप छाडेर विदा भएको
झापामा नेकपा भित्रको राजनीति थप तरंगित
सुरेन्द्र भण्डारी (इमेज)झापा, पुस १४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चुलिएको अन्तर संर्घषले ओलीकै गृह जिल्ला झापाको राजनीति थप तरङ्गित बनेको
नेकपाको विवाद मिलाउन काठमाडौं आइपुग्यो चिनियाँ टोली
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक राजनीतिक किचलोका कारण विकसित पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिन र उपयुक्त सल्लाह सुझाव प्रदान गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आएको छ । एयर चाइनाको
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै नेकपाभित्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारमा पनि तरंग पैदा गरेको छ । फुटको अन्तिम घडीमा रहेको नेकपाले अहिले ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ
गणेशमानको त्याग र निष्ठाको चौतर्फी प्रशंसा तर छैन व्यवहारमा लागू गर्ने तत्परता
काठमाडौं, कात्तिक २४ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको लागि वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर एवं लौहपुरुष गणेशमान सिंहको १०६औं जन्मजयन्ती सोमबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । नेपाली राजनीतिमा निष्ठा र
महासंघभित्र रहेको राजनीतिक क्यान्सरलाई निकाल्नुपर्छ : गोल्छा
काठमाडौं, कात्तिक १७ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले महासंघभित्र रहेको राजनीतिक क्यान्सरलाई निकाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । महासंघलाई पूर्वअध्यक्षहरुले राजनीति गर्ने थलो बनाएकोप्रति इंगित गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष
राजनीतिबाट वाक्क युवा नेता कृषितर्फ आकर्षित
प्यूठान, असोज १७ । राजनीतिबाट वाक्क भएका युवा नेताहरु पछिल्लो समय कृषितर्फ आकर्षित भएका छन् । कृषिबाटमात्रै सबैखाले परिर्वतन सम्भव हुने देखेपछि उनीहरु जनता झुक्याउने राजनीति नगर्ने भन्दै कृषितर्फ लागेका
ओली जिद्दी, दाहाल हठी, तीन नेताको स्वभाव कस्तो ? यसो भन्छन् दौंतरी (भिडियो)
इमेज जिल्ला ब्यूरो काठमाडौं, साउन १६ । ग्रामीण राजनीतिक यात्राबाट केन्द्रीय राजनीतिमा पकड जमाएका तीन नेताका कारण अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्धक बनेको छ । आ–आफ्नै स्वभाव र अनुभवमा